Namuhla, iwebhusayithi ukukhuthazwa - amasevisi ehambisana kakhulu ukuthi kukhona kokubili kwamabhizinisi amakhulu namancane. Iqiniso lokuthi Internet umuntu isisetshenziswa lenkampani, edalwa okuyiwona, futhi yiziphi izinzuzo ke kuletha kakade wakhuluma okuningi. abanikazi bamabhizinisi abafuna ukwakha iwebhusayithi yabo, njengoba umthetho, kakade lokhu. ubuchwepheshe ngayine inezidingo zayo izimfihlo ukukhuthazwa kanye netimphawu ezingafakwanga ngaphambilini wakwambula, ukuze "ukukhiqiza" nesincintisana entsha. Namuhla, idatha okungukuthi lutho izimfihlo fihla.
On the internet emakethe inani elikhulu izinkampani ezisebenza namuhla ukunikela ukukhuthazwa ezishibhile. Ezinye zazo zinikeza ukukhuthazwa esheshayo, namanye amaphromoshini zamanani aphansi. Kulesi simo, ezithakazelisa kakhulu iqiniso lokuthi ukusheshisa inqubo kuncike nenani kwezimali wachitha. Prakthiza ubonisa ukuthi kungakhathaliseki ukuthi isho ukuthini wayichitha abaphakamisi isayithi ngesonto elilodwa phezulu akunakwenzeka. Ukuze wenze lokhu kudingeka okungenani ube ngenyanga eyodwa, futhi leli nani akuxhomekile ngevolumu izimali ezitshaliwe.
Ubuciko intuthuko okusheshayo nobunye ubuchwepheshe cishe ezifanayo. Lokhu kuhlanganisa yokufuna amasayithi link, ngokubhala izihloko eliyingqayizivele futhi ukuthunyelwa yabo yesikhathi esizayo. Lokhu ubuchwepheshe ngempumelelo kanye namakhasimende kuthandwa kakhulu, njengoba bayakwazi ukukhetha izindleko zabo. Ngokwesibonelo: kuphela ukuthengwa amasayithi, ngakho-ke kuzodinga phezulu kancane edingekayo lokukhushulwa ezishibhile. Ukuze uthole ukukhuthazwa okusheshayo isayithi udinga ukuthenga indawo esikhathini esifushane futhi ukuze uthumele ku izihloko zabo. Ukuze yokuhlala, ungakwazi oda izihloko ezikhethekile okuqukethwe ejensi. Professionals usebenza Bureau of okuqukethwe abakwazi kuphela ubhala umbhalo isihloko esiyingqayizivele, kodwa futhi nokwandisa ke angukhiye. Ngokwemvelo ngokwezifiso umbhalo ube nalesi ezengeziwe izindleko, kodwa ukuhlolwa 'Yibani ukuze ukunambitha' izinjini.
ukukhuthazwa eshibhile amasayithi ewusizo kulabo abangekho ezisheshayo, okungukuthi, ngemuva kokuqala ukusebenza kwe-site e phezulu esiphethweni eyanikezwa search imishwana kufanele kwenziwe ngemva kwezinyanga ezimbili noma ezintathu. Ezimweni eziningi, uma udinga ngokushesha indawo ukukhuthazwa nekhasimende iyithuluzi bajabule. Promotion kuba ngempumelelo kuphela indlela enjalo yokuhlaziya isimo. amakhasimende Iningi ngephutha ikholelwa ukuthi ukugqugquzelwa isayithi osebenzelana umthombo eyodwa kuphela. Procurement ezisekelweni nokubeka esiyingqayizivele sici izihloko ekunyusweni ngempumelelo encane. Kuyadingeka ukuba ugcwalise isayithi untwisted, ngoba kusasele okusheshayo umthombo elibamba sihloko esisodwa noma kwesinye isithombe akunakwenzeka ukuba asebenze.
Ilungiselela ekunyusweni isisetshenziswa inthanethi unezigaba eziningana. Endaweni yokuqala kunqunywa inani elidingekayo okhiye ukunyusele kwekhasi lewebhu. Khona-ke, kudingeka sithole kwabantu umbhalo bese uhlole ubunjalo endaweni umbhalo. Lesi sakamuva kuyadingeka, njengoba ne Amakhasi okuqukethwe okungekona eliyingqayizivele nje kungukuthi ngokobungako, futhi umthombo inthanethi ungathola ngaphansi umphumela zokuhlunga noma iyawenqabela izinjini.
Uma sicabangela wathuthuka ngokushesha isayithi - isakhiwo efanele sokukokusebenza basingatha ekhethekile. Le phrojekthi ezintsha angeke kuqale kuze kube isakhiwo akufanele aletha ezingeni edingekayo. Ngakolunye uhlangothi ukukhuthazwa okusheshayo elula esobala, futhi ikuvumela ukuba iqaphe inqubo podviheniya.
Kungani Iwebhusayithi Promotion "simisiwe"?